पौडेल र सिटौलाले हिजो किन दिएनन् उम्मेदवारी ? - inaruwaonline.com
पौडेल र सिटौलाले हिजो किन दिएनन् उम्मेदवारी ?
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फाल्गुण २१, २०७२ समय: २:४६:०५
२१ फागुण काठमाडाैं / टिमसहित सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलाले बिहीबार उम्मेदवारी दर्ता गरेनन् । स्रोतका अनुसार सिटौलालाई मनाउन पौडेलले अरू नेताहरूमार्फत पहल गरिरहेका छन् । ‘सुजातालाई जस्तै सिटौलालाई पनि मनाएर संस्थापन पक्ष एक भएर जान छलफल चलिरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
यद्यपि, सिटौला पछि हट्ने मनस्थितिमा छैनन् । उनी देशभरबाट आएका प्रतिनिधिसाग आफ्नो उम्मेदवारीबारे छलफल गरिरहेका छन् । सिटौला शुक्रबार बिहान उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन् । संस्थापनको कोषाध्यक्ष को ? महामन्त्रीमा शशांक कोइरालालाई अघि सारेर बुधबार सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका पौडेलको प्यानलबाट कोषाध्यक्षको टुंगो अझै लागेको छैन ।
तराई मधेसबाट उम्मेदवार बनाउनेमा नेताहरू एकमत रहे पनि व्यक्तिको छिनोफानो भएको छैन् । ‘व्यक्तिको टुंंगो लागेको छैन, बिहानसम्म लाग्ला,’ पौडेलनिकट नेता मधु आचार्यले भने । कोषाध्यक्षमा पद्मनारायण चौधरी, फरमुल्लाह मन्सुर, पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव छोरा डा. चन्द्रमोहन वा भतिजी किरण यादवको नाम चर्चामा छ ।
देउवाको उम्मेदवारी दर्ता, केसीले दिएनन् शेरबहादुर देउवाले सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । उनको टिमबाट कोषाध्यक्षमा चित्रलेखा यादवले पनि उम्मेदवारी दिएकी छिन् । तर, महामन्त्रीका प्रत्याशी अर्जुननरसिंह केसीले भने बिहीबार उम्मेदवारी दिएनन् । उद्घाटन कार्यक्रमको व्यस्तताले बिहीबार नभ्याएको केसीले बताए । ‘सामूहिक रूपमा मनोनयन दर्ता गर्ने समय मिलेन, देउवाजीले वारेसनामामार्फत गराउनुभयो म भोलि बिहान दर्ता गर्छु,’ केसीले भने । अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ।